Bangladesh: Miverina ny Hartal · Global Voices teny Malagasy
Bangladesh: Miverina ny Hartal
Voadika ny 01 Jolay 2010 11:08 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, বাংলা, Español, English
Fihetsiketsehana any Dhaka. Sary avy amin'ny Flickr-n'i Vipez. CC BY-NC-ND
Taorian’ny fitsaharana nandritry ny telo taona, niverina indray ny Hartal any Bangladesh, endrika iray fanao any µAzia Atsino rehefa manao fitokonana. Ny fiombonamben’ny mpanohitra any Bangladesh dia niantso fanaovana hartal iraytamin’ny Alahady (27 Jona 2010) ho fanindriana ny fangatahan-dry zareo ahitana teboka 11 ka isan’izany ny famahana ny olan’ny filan’ny vahoaka, ny fanodikodinam-bola, ny fanaovana antsojay amin’ireo mpitarika nhy mpanohitra sy ny mpiasa sns.
Nafampana ny teo-draharaha raha ny fijerena ny harivan’ny andro nanaovana ny Hartal izay nisy tati-baovao milaza fandoroana fiaramadinika sy fitateram-bahoaka tany amin’ny faritra samihafa tao Dhaka renivohitra ka mpandefa maro no tratry ny fahamaizana lalina tamin’izany.
Nazmul Hasan Babu avy amin’ny blaogy Prothom Alo dia manolotra fanazavana vitsivitsy mikasika ny kolontsaina Hartal ao an-toerana:
Ireo antoko politika ao Bangladesh dia mampiasa ny famaritana ny Hartal amin’ny fiteny Gujrati izay tsy mbola hita hatrizay na taiza na taiza manerana izao tontolo izay. [..] Adinoy hoe ahoana ny famaritana itambarambe ny Hartal, amin’ny fijery ao Bangladesh, ny dikany dia hoe fananana nolovanay manokana ny firenena ka azonay akatona ny zavatra rehetra araka izay tianay.
Efa raiki-tampisaka ao an-tsain’ireo mponina ao Bangladesh ny Hartal. Singa iray amin’ny kolontsainay. Ny filazana ny datin’andro hanaovana Hartal dia midika fan a hakatona ny toeram-pivarotako, na horobaina. Amin’io andro ion y fiara tsy foiko dia hopotehin’ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny Hartal dia midika fa tsy ho afaka mandeha mamonjy toeram-piasana aho ary ho voabetrobetrokin’ny mpampiasa ahy. Ny ho vokany dia tsy handray karama ary handry fotsy miaraka amin’ireo zanako.
Zavatra efa fantatra daholo izany rehetra izany. Taorian’ny fitsaharana naharitra efa ho telo taona dia niverina indray ny Hartal eto Bangladesh. Maro ny olona ao Bangladesh no efa nanadino io nofy ratsy io. Noho izany mety tsy ho ankasitrahan’izy ireo mihitsy ny hiverenan’io indray. Saingy tsy olana izay hetahetan-dry zareo any, satria izay no tian’ireo mpitarika.
Ry mpitarika hajaina avy amin’ny mpanohitra, mba efa noeritreretinareo ve hoe hoatrinona no ho fatiantoky ny firenena anatin’ny andro iray noho ny fitokonana? Aina firy no hafoy? MAzava loatra fa tsy mila miasa saina amin’izany ianareo, satria ny politikanareo dia entim-bahoaka fa tsy ho an’ny vahoaka. Noho izany dia tsy manana fotoana ianareo hisainana ireo olana sy ireo fatiantoky ny vahoaka.
Manoratra i Habib ao amin'ny Amar blog :
Ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina avy hatrany rehefa miresaka momba ny Hartal dia ny fahavoazana goavana entiny ho an’ny firenena. Rehefa any amin’ny ilany misy ny mpanohitra ny antoko politika iray, tena zavatra ilaina ny Hartal hoy ry zareo, rehefa any amin’ny ilany mitondra indray dia mahazendana fa manohitra ny Hartal ry zareo.
Satria ny Hartal amin’ny famoronana tontolo baranahiny dia làlana iray hanosehana ny governemanta ho amin’ny toerana saropady.
Aminul Haque Bachchu at Pothom Alo blog dia manazava an-tononkalo ny Hartal:
Eny ankianja miaraka amin’ny fampiasana langilangy
Indro tonga ny mpanohitra
Fitaovana vaovao handripahana ny ory
baolina tokana am-pelatanan’ny mpanao politika
Fitaovana iray handranitana ny vahoaka io
Fandrebirebena handraisana fahefana
Jiro no an-tànana, poleta an-tsikinana
Ndeha hameno ny arabe sy hanimba fiara
Na izany aza, misy mponin’ny aterineto vitsivitsy manohana ihany koa ny Hartal. Ilay mpitoraka blaogy Dhibor ao amin'ny Somewhereinblog.net dia manome rariny ny fitokonana:
Tsy misy làlana hafa azo ijoroana afa-tsy ny Hartal mba hanoherana ny tsindrihazolena ataon’ny Ligin’ny Awami (antoko mitondra) Awam. Satria ny Ligin’ny Awami tsy mahafantatra resaka ampilaminana izany. Satria ry zareo no mibahan-toerana amin’ny asany sy n y politikany, raha tsy matanjakan tsar any fanoherana, dia handefa ny mpitandro filaminana hidaroka antsika avy ao an-damosina ry zareo. Efa misy soritsoritra sasantsasany mivoaka sahady.
Tsy ilaina ny fandosirana rehefa voadaroka. Efa ela tany alohga tany no tokony nanao izany ny mpanohitra (efa nisy ny olana) ary farany dia nanapa-kevitra ihany ry zareo hanao azy ity – mendrika fisaorana avy aty amiko ry zareo.
Io filazana etsy ambony io dia maneho ny fifandroritan’ny tontolo politika ao.
Ireo mpampiasa twitter koa dia isan’ny naneho hevitra toy izao:
Banglar Manchitro ao amin'ny Somewherein dia manontany hoe:
Tokony hampiasa fomba hafa hanaovana fihetsiketsehana ankoatra ny Hartal ny mpanohatra. Azony atao ny manao diabe, fihetsiketsehana mipetraka, fitokonana tsy hihinan-kanina, sns. Ka maninona no ity Hartal mpandrava ity no nambaran-dry zareo?
Tena ho an'ny firenentsika tokoa ve no hanohanantsika ity Hartal ity?